Zavakanto & Kolontsaina · Avrily, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Zavakanto & Kolontsaina · Avrily, 2010
Tantara mikasika ny Zavakanto & Kolontsaina tamin'ny Avrily, 2010
India 26 Avrily 2010
Misosa ny fakan-tahaka ny fanambadian'i Sania-Shoaib raha toa kosa ka manitatra ny fampahalalam-baovao, hany ka toa mitohy misavoritaka ny mponina an-tapitrisany avy amin’ireo firenena ireo. Raha eo ampikarakarana sy miala ireo sakantsakana amin'ny fanambadiany izy roa, mitohy any rehetra any ny fanakianana mivaivay sy manafintohina.
Kolombia: Ny Arepas, fomba fanao isaky ny tolakandro
Amerika Latina 18 Avrily 2010
Any Kolombia, ny fotoana eo anelanelan'ny amin'ny 3 sy 6 ora hariva dia matetika natokana ho an'ny kafe na sôkôla mafana miaraka amin'ny arepa na mofo hafa namboarina. Efa zary lasa fomba amam-panao ifandovan'ireo taranaka mifandimby izany.
Hehy 07 Avrily 2010
Amerika Latina 03 Avrily 2010
Nandritra ny roa herinandro izay no renivohitry ny lanonana sy ny lalao fanatanjahantena isankarazany ny any Medellin, Colombia noho ny fandraisan'ity tanàna ity ny Lalao Amerikana tatsimo fahasivy (ODESUR) ifaninanan'ny firenena Amerikana Latina sy handrombahana medaily amin'ny taranja isan-karazany. Miala amin'ny mahazatra kely na ny tompontany na ny vahiny hizaha toerana maro samihafa sy hijery lalao.